Yakavanzika Mutemo - Potato Sisitimu
Mbatata System Magazine
Webhusaiti yedu kero: http://potatosystem.ru/
Ndezvipi zvakasanangurwa zvatinozviunganidza uye nokuda kwechinangwa chei
Kana mushanyi asiya pane zvinyorwa panzvimbo yepaiti, tinounganidza deta yakatsanangurwa mupepa rekupa mazwi, pamwe chete nekombiki yeIndaneti yevakashanyi uye data yevashandisi-vashandi vekushandura kuitira kuti vasarudze spam.
Tambo isingazivikanwe inogadzirwa kubva kuemail kero ("hash") inogona kupihwa kune iyo Gravatar sevhisi kuti uone kana uri kuishandisa. Iyo Gravatar yekuvanzika mutemo inowanikwa pano: https://automattic.com/privacy/. Kana imwe nguva yako yekutenderwa yabvumidzwa, yako mbiri mufananidzo ichave inoonekwa pachena mumamiriro ekutaura kwako.
Kana iwe uri muchengeti wakanyoresa uye ugoisa mapepa panzvimbo iyi, unofanirwa kudzivisa kuisa mifananidzo ne EXIF ​​metadata, sezvo inogona kunge ine data yako yepa GPS. Vashanyi vanogona kubvisa ruzivo urwu kuburikidza nekukanda zvifananidzo kubva pawebsite.
Kana iwe ukasiya mhinduro pane webhusaiti yedu, unogona kuita kuti kuchengetedzwa kwezita rako, email newebsite iwe mukiki. Izvi zvinoitwa nokuda kwako, kuitira kuti usazadza deta zvakare kana uchitaura zvakare. Aya makiki akachengeterwa gore rimwechete.
Kana uine kero panzvimbo yepaiti uye iwe uri kupinda, tichaisa cookie yenguva pfupi kuziva kana browser yako inobatsira makiki, cookie haina humwe ruzivo rwemunhu uye inobviswa paunopfiga browser yako.
Paunopinda muakaunti yako, isu tinoisawo makuki akati wandei ane rekupinda rekupinda uye skrini maseteni Login makuki akachengetwa kwemazuva maviri, makuki ane skrini skrini - kwegore. Kana iwe ukasarudza iyo "Ndirangarire ini" sarudzo, yako yekutumira ruzivo ichachengetedzwa kwemavhiki maviri. Paunobuda kunze kweaccount yako, maokie ekupinda anodzimwa
Paunenge uchigadzira kana kuparidzira imwe nyaya iri mu browser, imwe cookie ichachengetedzwa, haina ine dunhu rega uye inongova chete chizivo chekupinda kwawakagadziridza, inopera muzuva re1.
Zvinyorwa zviri panzvimbo ino zvinogona kusanganisira zviri mukati mazviri (somuenzaniso, mavhidhiyo, mifananidzo, zvinyorwa, nezvimwewo), zvinyorwa zvakafanana zvinoita sekuti mushanyi akaenda pane imwe nzvimbo.
Aya mawebhusaiti anogona kuunganidza data pamusoro pako, kushandisa makuki, kusevha yakawedzera yechitatu-bato yekutarisa uye kutarisa kwako kutaurirana neyakaiswa mukati mechezita, kusanganisira kutsvaga iko kutaurirana kana iwe uine account uye iwe unobvumidzwa pane iyoyo saiti.
Ndiani watinogovana data rako naye
Tinoshandisa nguva yakareba sei deta yako
Kana iwe uchisiya mhinduro, inzwi pachayo uye metadata yayo inochengetwa nokusingaperi. Izvi zvinoitwa kuitira kuti vaone uye vabvumire mazwi anotevera anotevera, pane kuvaisa mumugwagwa wekutendera.
Kune vashandisi vanyoresa pane yedu yepaiti, tinochengetedza ruzivo rwemunhu wese rwavanopa muhupfumi hwavo. Vese vashandisi vanogona kuona, kuchinja kana kubvisa ruzivo rwavo kubva pane zvinyorwa panguva ipi zvayo (kunze kwezita rekushandisa). Nzvimbo yehutungamiri yehutungamiri inogonawo kuona uye kuchinja iyo ruzivo.
Ndezvipi kodzero dzako kune data yako?
Kana iwe une i-akhawunti panzvimbo yepaiti kana kana wakasiya mazano, unogona kukumbira faira yekutsvaga kwemashoko ega atakachengetedza pamusoro pako, kusanganisira data iwe wawakapa. Iwe unogonawo kukumbira kubviswa kwe deta iyi, haina kusanganisira data yatinofanira kuchengetedza nekuda kwekutarisira, nemutemo kana nekuda kwekuchengeteka.
Mutsanangudzo mazwi anogona kuongororwa nebasa rekutsvaga chekuona chekuita.
Ruzivo rwako rwekuonana
Tinochengetedza sei data rako
Ndedzipi dzinopesana nekubiridzira maitiro zvinogamuchirwa
Ndeapi mapato echitatu atinowana data kubva
Ndezvipi zvisarudzo zve otomatiki zvinoitwa zvichibva padatha remushandisi
Indasitiri inorayiridza kuburitswa kwezvinodiwa